Soosaarayaasha & Shirkadaha Dhalada Khamriga - Warshadda Qamriga ee Shiinaha
Naqshadeynta gaarka ah 50ml 100ml 200ml 250ml 350ml 500ml dhalo nadiif ah oo dhalo ah oo khamri ah oo leh dabool bir ah
Isticmaalka Warshadaha: Vodka ﹑ whiskey ﹑ brandy ﹑ gin ﹑ rum ﹑ liquor ﹑ ruuxyada Waxyaabaha aasaasiga ah: Super Flint Sealing Type: Cork MOQ: Hal weel 20 '(qiyaastii 12870pcs) Wax ka qabashada dusha waxay ku dari kartaa daabacaadda shaashadda ast dubay ˴ daabacaadda ˴ ciin-saarista electroplating iyo ku buufinta midabka decal ... iwm ODM: La aqbali karo
Dhalo dhalada galaaska khamriga
Waxaan ku faraxsanahay xaalad aan caadi aheyn oo udhaxeysa iibsadeyaasheena alaabteenna tayada wanaagsan, sicirka qiimaha gardarrada ah iyo taageerada ugu weyn ee Dhimista Caadiga ah ee Shiinaha Dhalada Dhalada ah / Dhalada Ruuxa / Dhalada Wiska / Dhalada Biyaha / Dhalooyinka Dhalada ah, Inagoo iibinayna si aan u balaarino warshadeena caalamiga ah, waxaan inta badan ka helnaa macaamiishayada kor ku xusan alaabada waxqabadka tayada sare leh iyo taageerada. Qiimaha Dhimista Caadiga ah ee Shiinaha Dhalada Muraayadda iyo qiimaha Dhalada, Waxaan ku guuleysaneynaa macaamiil badan oo lagu kalsoon yahay khibrad hodan ah, qalab casri ah, kooxo xirfad leh, xakamaynta tayada adag iyo adeegga ugu fiican. Waxaan damaanad qaadi karnaa dhammaan waxyaabahayaga. Macaashka macaashka iyo qanacsanaantu had iyo jeer waa himiladeenna ugu weyn. Waa inaad nala soo xiriirtaa. Fursad na sii, ku siiya lama filaan.
dhalada quraaradaha cad cad vodka raaxada ah
Adiga oo adeegsanaya sumcad ganacsi oo yar, bixiyaha iibka kadib iyo qalab casri ah oo wax soo saar leh, hadda waxaan kasbanay rikoodh aan caadi aheyn oo udhaxeeya macaamiisheena aduunka oo dhan oo ah shahaadada CE Shaaha Shiinaha Nice Tayada 700 Ml Riyada Dhalooyinka Whiskey Glass leh. falsafada ganacsiga ee 'macmiilka 1aad, horay usoco', waxaan si kal iyo laab ah u soo dhawaynaynaa macaamiisha gurigaaga iyo dibada si ay ula shaqeeyaan annaga oo ku siinayna taageerada ugu wax ku oolka badan! CE Shahaadada Dhalada Shiinaha ee Dhalada, Dhalada Caga Dheer ee Dhalada ah, Suuqa sii kordhaya ee tartanka, Iyada oo adeeg daacad ah alaab tayo sare leh iyo sumcad wanaagsan mudan, waxaan had iyo jeer u fidinaa macaamiisha taageerada alaabada iyo farsamooyinka si loo gaaro iskaashi muddo dheer ah. Ku noolaanshaha tayada, horumarka amaahdu waa raadintayada weligeed ah, Waxaan si adag u aaminsanahay in booqashadaada kadib aan noqon doonno wada-hawlgalayaal muddo-dheer ah.
Dhalooyinka quraaradaha dhalada ah
JUMP waa soo saare wax soo saare muraayadaha oo khibrad u leh 20 sano. Ku takhasusay soo saarista dhalooyinka kala duwan ee dhalooyinka & dhalooyinka quraaradaha ah. Wuxuu daboolayaa aag 50000 m² wuxuuna tiriyaa in kabadan 500 oo shaqaale ah, soosaarida awooda waa 800 milyan oo kumbuyuutar sanadkiiba. Iyada oo la boodboodayo taageero xagga farsamada oo heer sare ah waxaad haysaa dhalooyinka quraaradaha ah iyo dhalooyinka quraaradaha ah Yurub export Mareykanka ˴ Koonfurta Ameerika ˴ Koonfur Afrika ˴ Koonfur-bari Aasiya ˴ Ruushka ˴ Bartamaha Aasiya iyo suuqa Bariga Dhexe, halkaas oo ku leh sumcad wanaagsan. Sidoo kale waxaad laamo ku leedahay Myanmar ˴ Filibiin ˴
Dhalooyinka khamriga ee galaaska 'Champagne'
Waxaan ku adkeysaneynaa inaan bixinno jiil tayo wanaagsan leh oo leh fikrad ganacsi oo aad u wanaagsan, dakhli daacad ah iyo sidoo kale caawimaadda ugu fiican uguna dhakhsaha badan. Kuuma keeni doonto oo keliya badeecada ama adeegga tayada sare leh iyo faa iidada weyn, laakiin waxaa laga yaabaa in tan ugu muhiimsan ay badanaa tahay in lagu mashquuliyo suuq aan dhammaad lahayn oo qiimo jaban loogu talagalay Shiinaha 6 Sanduuqa Khamriga Dhalada / Beer ee Khariidadda Baakadaha, Si aad wax badan uga ogaato wixii aan awoodnay shaqsi ahaan adiga kuu samee, nala hadal wakhti kasta. Waxaan rajeyneynaa inaan adiga kula horumarino ururro heer sare ah oo muddo-dheer soconaya. Qiimo jaban oo loogu talagalay Sanduuqa Beer Shiinaha, Cabbirka Sanduuqa Beer, Hubinta tayada wax soo saarka sare adoo dooranaya kuwa ugu fiican, waxaan sidoo kale ku hirgelinay geedi socodka xakamaynta tayada qoto dheer inta lagu gudajiro hanaankeena qodista. Dhanka kale, helitaankeena warshado badan oo kala duwan, oo ay weheliso maareynteena heer sare ah, waxay sidoo kale hubineysaa inaan si dhakhso leh ugu buuxin karno shuruudahaaga qiimaha ugu fiican, iyadoo aan loo eegin cabirka dalabka.
Dhalo galaas khamri kala duwan ah
Xarumaheena si wanaagsan loo qalabeeyay iyo maamul heer sare ah oo heer sare ah dhammaan heerarka abuurista waxay noo suurta gelineysaa inaan damaanad qaadno wadarta qanacsanaanta iibsadaha ee Qiimaha Jaban ee Shiinaha Warshad Bixinta Wareegta Dhalada Cagaaran ee Qamriga Qamriga leh Dhalada Qamriga ee Gold Champagne Dhalo Liquor Alcohol Spirit Vodka Vottle for Wholesale, We ' run sheeg oo fur. Waxaan ku eegaynaa mushaharkaaga booqashada iyo horumarinta xiriirka aaminka ah iyo muddada-dheer. Qiimo jaban oo loogu talagalay Dhalada Khamriga ee Shakhsiyeed ee Shiinaha, Dhalada Bubbly, sababtoo ah shirkadeena ayaa ku adkeysaneysay fikradda maamulka ee "Badbaadinta Tayada, Horumarinta Adeegga, Faa'iidada Sumcad". Waxaan si buuxda u ogaanay taagnaanshaha amaahda wanaagsan, xalalka tayada sare leh, qiimaha macquulka ah iyo adeegyada u qalma ayaa sabab u ah in macaamiisha ay noo doortaan inaan noqono lamaanahooda ganacsiga muddada dheer.
Dhalada khamriga ee dhalada khamriga casaanka ah
Dhalooyinka quraaradaha ee Champagne
Ku sii adkaysiga "Tayada sare, Gaarsiinta Degdega ah, Qiimaha Tartanka", waxaan dhidibada u aasinay macaamiil ka socota dibada iyo gudahaba waxaana helnaa faallooyin sare oo macaamiil cusub iyo kuwa duug ah. Fikradda ururkeenu waa "Daacadnimo, Xawaare, Bixiyaha, iyo Qanacsanaanta". Waxaan raaci doonnaa fikraddan oo waxaan kasban doonnaa macaamiil aad iyo aad u badan qanacsanaanta.
Sprite dhalada whiskey dhalada
Awoodda: 300ml, 500ml, 700ml ama Khariidad loo habeeyay: Aluminium Fur Logo Logo: Logo Macaamiil La Aqbali Karo: Maareyn Dusha oo saafi ah ama la habeeyay
Dhalo Saliid Cagaaran, Saliida Zeytuunka Iyo Khamriga Qamriga, Jar Kaydinta Saliida Olive, Dhalo Saliid saytuun ah, Dhalo Saliid saytuun ah, Dhalada Saliida Saliidda ah ee 250ml,